Ezi afọ ọhụrụ 2015 – Gịnị bụ na ụlọ ahịa?
January 1, 2015 site na rịọ 3 Comments
Dị nnọọ chọrọ ime a ngwa ngwa writeup banyere ihe ndị na-zubere maka abịa afọ:
Backend eriri nchịkọta akụkọ – a mma bụ ihe 80% zuru ezu site ugbu a, ọ na-ekwe gị aka ịhụ ndido urụk ịtinye na nchekwa data na ịrụ ụfọdụ omume ndị na-. Ihe dị ugbu a ka nnọọ ike dị ka wepụ nsụgharị nile si otu nsụgharị ga-aghọ a snap. Nke a na atụmatụ na-atụ anya maka ntọhapụ na a izu ole na ole.
Nkwado maka wijetị na uploads ndekọ – omenala wijetị dere nwere e mkpesa (na ezi otú) banyere eziokwu ahụ upgrading magbuo a reinstall nke wijetị. The echiche bụ isi ga-ekwe ka ụfọdụ faịlụ na-anọ n'ebe ahụ ma na-ezere na hassle. Nke a nwekwara ike imeghe nhọrọ nke a downloadable wijetị ndekọ nke ga-ekwe ka anyị nye ihe oke nke wijetị na-enweghị inflating na plugin file size.
Frontend eriri nchịkọta akụkọ – a ga-ike ụfọdụ interface ka ndido urụk na peeji nke, na mgbe ghara “WYSIWYG” ga-ekwe ka ụfọdụ mma workflow, tumadi na ekele na-edezi meta ndido urụk na ndị ọzọ na zoro ezo ndido urụk, na ụfọdụ chi, ajax nsụgharị ga-editable mgbe a nweta nkwalite. Nke a ga-a ọnwa ole na ole na-abịa.
Onuogugu usoro nkwado – a mma ga-akpaghị aka ịsụgharị nọmba site na European onuogugu usoro Arabic na Hindi usoro (ma eleghị anya, osote itughari). Ọ bụghị a pụrụ iche mma ma a mma mma na-abịa n'oge na-adịghị a Parser gị nso.
WP NchNhr mwekota – adịghị nnọọ nkọ na-eme n'ezie a, nwere ike ime, nwere ike ọ gaghị.
Ọ bụla na-ekwu na echiche ga-nabatara n'okpuru, ma ọ bụrụ na ha na-eme uche anyị ga-tinye ha anyị workplan. Ọ bụrụ n'ezie na-achọ na-akwalite a mma i nwere ike kwalite nzuzo, kpọtụrụ anyị site na ụdị.
-Eme Ihe ike na-ekwu,
January 14, 2015 na 1:35 na
Unu emeela nnọọ maka gị ọrụ siri ike na gị ukwu Plugin!
M na-achọ gị a ukwuu arụpụtaghị a na New 2015 Year!
M na-eche ọtụtụ n'ime ihe niile ga-ekweta na m, ga-achọ ịhụ oftener mmelite 😉
Daalụ ọzọ, na-eche na nke a dị egwu atụmatụ!
February 18, 2015 na 4:36 na
Nọgidenụ na-ahụ oké ọrụ, otu! Ya mere obi ụtọ m hụrụ Transposh na ga-anọgide na-akwado gị Otú ọ dị m nwere ike. Ị MERE NKE ỌMA!
Steen Grønfeldt na-ekwu,
March 6, 2015 na 4:58 obi
Nke a bụ nke mbụ m na-ahụ gị plugin – M ga-enye Jere, ọ bụ nnọọ ihe na-aghọ nkọ! M na-arụ ọrụ dị ka onye nsụgharị ruo ọtụtụ afọ, na nke a ka m ga-anọgide na-arụ ọrụ na – ga na-agbalị inye m onyinye site rụọ ọrụ ndị Danish nsụgharị nke na peeji nke!